သြစတြေးလျအရည်အချင်းမူဘောင် (AQF) သည်သြစတြေးလျားပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးတို့တွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အရည်အချင်းများအတွက်အမျိုးသားရေးမူဝါဒဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ from တစ်ခုစီမှအရည်အချင်းများကိုပြည့်စုံသောအမျိုးသားအဆင့်အရည်အချင်းမူဘောင်တစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောလေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် (RTO 60154အောက်ပါ AQF အရည်အချင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်အတွက် BSB40920 လက်မှတ် IV
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ်အတွက် ၀ င်ခွင့်အတွက်ကြိုတင်လိုအပ်ချက်များမရှိပါ။
ဖွင့်လှစ် multimedia စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရင်းအမြစ်အချက်အချာဖြစ်သည် အားလုံးကိုအခမဲ့သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေမရှိသည်။
OPEN မှအွန်လိုင်းယူနစ် ၁၂ ခုသည် PMBOK, Agile နှင့် PRINCE2 ကဲ့သို့သောလူသိများပြီးအလွန်တန်ဖိုးထားသည့်နည်းစနစ်များအပါအဝင်ခေတ်ပြိုင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ရှုထောင့်အားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်နာသောအွန်လိုင်းဉာဏ်စမ်းပဟေallိများအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခြင်းသည်ကျေနပ်အားရလိမ့်မည် လိုအပ်ချက် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်အတွက် BSB40920 လက်မှတ် IV များအတွက် entry လိုအပ်ချက်များကို။
ဖွင့်လည်းတစ် ဦး အဖြစ်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ် ပူးတွဲလိုအပ်ချက် ကနေတဆင့် ARC အလုပ်ရုံစီးရီး ဒါမှမဟုတ် တက်ကြွဆရာထောက်ခံမှု စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်တွင် BSB40920 လက်မှတ် IV သို့ကျောင်းသားများတိုက်ရိုက်စာရင်းသွင်းသောအခါ။
OPEN ဉာဏ်စမ်းပဟေinိများအတိုင်းယေဘူယျ 100% တန်းရရှိသောကျောင်းသားများကိုလည်း Project Management Institute မှ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည် ကုသိုလ်အမိန့်.
ဉာဏ်စမ်းပဟေallိဖြေပြီးသောသူအားလုံးအတွက်ဝင်ခွင့်ရှိသည် ဖွင့်လှစ် (ငါတို့ အွန်လိုင်းစီမံကိန်း EducatioN ပေါ်တယ်).
ဖွင့်လည်းတစ် ဦး အဖြစ်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ် ပူးတွဲလိုအပ်ချက် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်ရှိ BSB40920 Certificate IV တွင်ကျောင်းသားများကိုတိုက်ရိုက်စာရင်းသွင်းသည့်အခါတက်ကြွစွာလမ်းညွှန်မှုပေးပါသည်။
ကျောင်းသားများအနေဖြင့်စကားလုံးပြုပြင်ခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများသည်လည်းသက်သေအထောက်အထားရှိရမည် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှုန်းအတိုင်းအင်္ဂလိပ် ကျွမ်းကျင်သောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက်သြစတြေးလျအစိုးရစံနှုန်း။ ကျောင်းသားများသည်ဤစံသတ်မှတ်ချက်အတွက်သီးခြားပြင်ဆင်ရန်နှင့်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။
အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြားရွေးချယ်စရာအထောက်အထားများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်။
သင်၏အချိန်အများစုကိုသင်၏ဆရာ၏ ဆက်လက်၍ တက်ကြွသောအထောက်အပံ့ဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကိုစတင်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထူးခြားစွာတုန့်ပြန်သောလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်၏ဆရာသည်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
အောင်မြင်စွာဘွဲ့ရရန်၊ သင်သည်အောက်ပါ AQF ယူနစ်များတွင်သက်သေအထောက်အထားရှိရန်လိုအပ်သည်။
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်ရှိ BSB40920 လက်မှတ် IV ကိုအကန့်အသတ်မဲ့ဖြင့်အပ်နှံသည် တက်ကြွဆရာထောက်ခံမှုသင်၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်အကြံဥာဏ်များပေးခြင်း။
သက်သေပြစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများသည်အနည်းဆုံး (၁၀) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများ၊ အစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်
အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့သည်စာသင်ခန်းများနှင့်စာသင်ခန်းများမှစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုသာသင်ယူခဲ့ကြသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကထိကများ မဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအားပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်သက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏အမြင်များမှစီမံကိန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများစွာကိုသင်ရိုးပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
သင်ယူသူများအားလမ်းညွှန်သင်ကြားခြင်းများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တာ ၀ န်ပေးခြင်းသည်စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ အဆက်အသွယ်အချိန်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ အကန့်အသတ်မရှိသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုမြင့်မားသောစွန့်စားမှုသင်ယူသူများသည်သင့်လျော်သောအထောက်အပံ့အဆင့်ကိုရယူနိုင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သောသင်တန်းသားများကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသိပ္ပံဌာနသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးသောကမ္ဘာအနှံ့ရှိသင်ယူသူအမျိုးမျိုးအားတက်ကြွစွာလမ်းညွှန်မှုဖြင့်မိမိကိုယ်မိမိသင်ယူခြင်းကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရမှထောက်ပံ့သောကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုလွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း ၈၀၁TP1T ထက်ပိုသောပျမ်းမျှပြီးစီးနှုန်းသည်ပြသနေသည်။ ကဏ္ figures အားလုံးတွင်သင်တန်းပေးသူများ၏ထိပ်ဆုံး ၅ ရာခိုင်နှုန်းတွင်ရှိသည်။
ဖွင့်ပွဲပြီးဆုံးသည့်အပြင်ကျောင်းသားများသည်အောက်ပါစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်သူတို့၏လျှောက်လွှာများကိုအောက်ပါအချက်များအားဝေဖန်။ ပြန်လည်ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ရမည် -
Project Gantt ဇယားတွင် -
Task level အရင်းအမြစ်များခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့်စီမံကိန်း၏ဘတ်ဂျက်
သင်သင်တန်းတလျှောက်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှမှတ်တမ်းတင်ထားသောအင်တာဗျူးအကဲဖြတ်မှုများတွင်ပါဝင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ဤအကဲဖြတ်ချက်များကိုပုံမှန်အားဖြင့် Zoom သို့မဟုတ်အခြား video-conferencing platform မှပြုလုပ်သည်။
download လုပ်ပါ အကဲဖြတ်လမ်းညွှန် သင်တန်းလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ BSB40920 လက်မှတ် IV ပြီးပါကသင်သည် -
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏လူ့အသိုက်အ ၀ န်းကိုနားလည်ခြင်း
ရိုးရှင်းသောစီမံကိန်းများ၏စတင်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုစီမံပါ
စီမံကိန်းပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာဆက်သွယ်ပါ
သင့်အနေဖြင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည် အသိအမှတ်ပြုစီမံကိန်းအရာရှိ (သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုစီမံကိန်း Professional အကယ်၍ သင်သည်သုံး (သုံးနှစ်) စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံကိုသက်သေပြနိုင်လျှင်။
OPEN ဉာဏ်စမ်းပဟေinိများအတိုင်းယေဘူယျ 100% တန်းရရှိသောကျောင်းသားများသည် Project Management Institute မှထပ်မံတက်ရောက်ကြမည် ကုသိုလ်အမိန့်.
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်ရှိ BSB40920 လက်မှတ် IV AU$4,000 ဖြည့်စွက်ရန်။
သြစတြေးလျနှင့်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တော်တော်များများသည်ဘွဲ့ကြို (ဘွဲ့) များအဆင့်အတန်းမြင့်မားရန်အတွက် Project Management Practice တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ BSB40920 လက်မှတ် IV ကိုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင်၏တက္ကသိုလ်ပရိုဂရမ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာခရက်ဒစ်ကိုမည်သို့အသုံးချနိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်။
၎င်းသည်မြန်ဆန်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုထားသောဘွဲ့ရများအားလုံးအတွက် ၀ င်ခွင့်ရှိသည် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်အတွက် BSB40920 လက်မှတ် IV.
ဤသင်တန်းပြီးဆုံးရန်အတွက်စကားလုံးပြုပြင်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲ (ဥပမာ - Microsoft Word) ဖြင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာကိုစိတ်ချရသော ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဤသင်တန်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် (၆) လကြာ (စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ BSB40920 လက်မှတ် IV ပြီးဆုံးပြီးနောက်) ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ကျောင်းအပ်ခြင်းသည်နှစ်နှစ်ကာလအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးတောင်းခံသည့်အခါခေတ္တရပ်နားနိုင်သည်။
သင်၏အချိန်အများစုကိုသင်၏လမ်းညွှန်ကို ဆက်လက်၍ တက်ကြွစွာအထောက်အပံ့ဖြင့်သင်၏အကဲဖြတ်မှုစီမံကိန်းကိုစတင်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
BSB50820 စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒီပလိုမာ၏လမ်းညွှန်သင်ကြားမှုအစီအစဉ်သည်သင်၏လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်အိမ်သို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုပို့ပေးသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်၏စတင်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုအကန့်အသတ်မရှိနှင့် On-demand ကကူညီလိမ့်မည် တက်ကြွဆရာထောက်ခံမှု.
ကျွန်ုပ်တို့၏ BSB50820 စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒီပလိုမာပြီးဆုံးလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ -
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏လူ့အသိုက်အ ၀ န်းကိုမြှင့်တင်ပါ
ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးတွင်တက်ကြွသောစီမံကိန်းစိန်ခေါ်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်း
ဘွဲ့ရများသည်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ ၀ င်ခွင့်ရရန် (pre-) အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည် အသိအမှတ်ပြုစီမံကိန်းမာစတာ အကယ်၍ သူတို့သည်စီမံကိန်းနှင့်သူစိမ်းဆန်လျှင်၎င်းတို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
BSB50820 စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒီပလိုမာကုန်ကျစရိတ် AU$3,000 ဖြည့်စွက်ရန်။
သြစတြေးလျားနှင့်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ BSB50820 စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒီပလိုမာကိုဘွဲ့ကြို (ဘွဲ့) ဆီသို့အဆင့်မြင့်ရပ်တည်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းများကသင့်အားစတင်ရန်ခွင့်မပြုမီ၊ စာသင်နှစ်အစကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်အထိမစောင့်နိုင်ပါ။ များသောအားဖြင့်သင်၏ကျောင်းအပ်မှုပြီးသည်နှင့်လေ့လာမှုစတင်နိုင်သည် ၂၄ နာရီအတွင်း!
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏အရည်အချင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်သင်သည်လည်းတောင်းဆိုနိုင်သည် ရရှိမှု၏ဖော်ပြချက်, သင်ပြီးစီးခဲ့သောယူနစ်များ၏တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့သည့်မည်သည့်ဌာနကိုမဆိုတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးအခြားသြစတြေးလျားရှိအခြား RTO များနှင့်လည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်များသည်သင်၏အဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်အဆင့်အရည်အချင်းများသို့လျင်မြန်စွာခြေရာခံနိုင်သည် - ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်။
ရှိသည် အကန့်အသတ်မရှိ သင်၏အလုပ်ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုသင်အကြိမ်အရေအတွက်သို့ - သင်မှန်ကန်စွာရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူရှိနေလိမ့်မည်။
အီးမေးလ်ဖြင့်မေးမြန်းခြင်းများအားလုံးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုရက်အတွင်းတုန့်ပြန်သည်။ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်အတွက်အလှည့်အပြောင်းသည် ၅ ရက်အတွင်းဖြစ်သည်။
အဆင့်တစ်ခုစီကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခြင်းသည်သင် (သင်နှင့်သင်၏လက်ရှိအလုပ်ရှင်များ) ကိုသင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ထားသောအလုပ်ခွင်အခြေအနေများတွင်သင်လေ့လာထားသောသီအိုရီကိုအသုံးချနိုင်ကြောင်းပြသရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်ခွင်၌အလုပ်များပါကအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသော်လည်းဤအခွင့်အလမ်းမရှိသူများသည်လေ့လာမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်အရည်အချင်းကိုပြသရန်စီမံကိန်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလုံလောက်စွာလက်လှမ်းမီသရွေ့သင်တန်းကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
သင်အလုပ်လုပ်သောအချိန်နှင့်သင်၏လုပ်ငန်းခွင်စီမံကိန်းများကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းအပါအဝင်အရည်အချင်းတစ်ခုစီ (ဒီပလိုမာအတွက် ၁၂ လလုံးလုံး) ကိုပြီးမြောက်ရန် ၆ လအထိခွင့်ပြုသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကြိုတင်သင်ယူမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Project Management မှအင်စတီကျုးရှင်းကလက်ခံသည်မှာတရားဝင်လေ့လာခြင်း၊ အလုပ်ခွင်၌နှင့်ဘဝအတွေ့အကြုံများမှအလွတ်သဘောသင်ကြားခြင်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဟုလက်ခံသည်။ ငါတို့ ကြိုတင်လေ့လာရေးမူဝါဒ၏အသိအမှတ်ပြုမှု သင်၏ကြိုတင်လေ့လာမှုကိုအင်စတီကျုမှအသိအမှတ်ပြုရန်သင်မည်သို့လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့်သင်၏သင်ယူမှုနှင့်လုပ်ငန်းခွင် / ဘဝအတွေ့အကြုံများကိုအကဲဖြတ်ရန်အင်စတီကျု့တွင်မည်သို့ရှိသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။
ဤအစီအစဉ်၏ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ကျောင်းသားများသည် RPL ကိုချီးမြှင့်သည် -
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကိုအသိအမှတ်ပြုထားသောပညာရေးအဖွဲ့အစည်းကသီးခြားလွတ်လပ်စွာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်
ဤကင်းလွတ်ခွင့်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ သင်၏သင်တန်းကြေးကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခြင်းကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင်၏အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြားရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပေး၍ အကဲဖြတ်သည်နှင့်အမျှအင်္ဂလိပ်သည်အဓိကဘာသာစကားမဟုတ်သောတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သောကျောင်းသားများနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသည်ဒုတိယဘာသာဖြစ်သည့်အခြားသူများသည်အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းကိုကျောင်းအပ်ရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်မျှော်လင့်ရသည်။
သင်သည်အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးကြောင်းသက်သေပြခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြနိုင်သည် သြစတြေးလျအစိုးရ၏ကျွမ်းကျင်သောရွှေ့ပြောင်းမှုစံနှုန်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအင်္ဂလိပ်များအတွက်။
စည်းကမ်းချက်အရအင်္ဂလိပ်စာ၊ စာတတ်မြောက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်အရေးအသားအထူးလိုအပ်ချက်ရှိသောကျောင်းသားများသည်လိုအပ်သည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျောင်းမတက်မီလေ့လာမှုအစီအစဉ်အတွက်သင့်တော်မှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုရန်။